मनकारी डाक्टर सा’ब! – Health Post Nepal
मनकारी डाक्टर सा’ब!
२०७७ साउन ६ गते १८:२६
वीरेन्द्रनगर–६, मंगलगढी चोकबाट पश्चिम (करिब २.४१ किमि) पुगेपछि सडकको बायाँपट्टि बगैंचाले घेरिएको सुन्दर घर भेटिन्छ। जहाँ चराचुरुगीले निःसंकोच आफ्ना गुड लगाउँछन्। बच्चा हुर्काउँछन् र त्यहीं कुनै एक रूखमा फेरि बसाउँछन्। बगैंचाको त्यो दृश्यझै घरमा पनि त्यहाँ धेरै युवायुवतीले आफ्नो भविष्यका रेखा कोरेका छन्।
रोगले बर्बराउने कर्णालीको उपचारमा उनका कान्छा छोरा डा. नवराज केसी चिकित्सक भएरै सेवा गर्न थालेको वर्षौं भइसकेको छ।
त्यही समय डा. केसीले सुर्खेत बस्ने निधो गरे। साथीलाई फोन गरेर सामान पठाइदिन भने। बन्दोबस्तीको सामान पाल्पा मेडिकल कलेजबाट फोनकै भरमा सुर्खेत आइपुग्यो। उनी सम्झन्छन्, ‘अस्पतालको अवस्था दयनीय थियो। बालशिशु मृत्युदर उच्च थियो। त्यही अवस्थाले मलाई जन्मस्थान सुर्खेतमा सेवा गर्न तान्यो।’
उनीलगायत प्रदेश अस्पताल आइपुगेका डा. केएन पौडेल र डा. रुपकले तीन महिनासम्म पारिश्रमिक लिएनन्। अस्पताल व्यवस्थापन समितिसँग चिकित्सकलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने बजेट शीर्षक नै थिएन। चिकित्सकहरूले बिना शुल्क स्वास्थ्यजाँच गरिरहे।
उनी सम्झन्छन्, ‘नेपालगन्जमा म्युजिक कन्सर्ट ग-यौं। म्युजिक कोर्डिनेटर म नै थिएँ। स्थापनाकालमा एनजिएमसी हेल्पिङ हेन्ड्सको सचिव हुँ। २०६० सालतिरको समय हो। सो कार्यक्रमले धेरै सहयोग ग¥यो। लाखौं रकम संकलन भयो। हामीसँग कोठाभर औषधी हुन्थ्यो। अस्पताल रकमको अभावले उपचार गर्न कठिन मानिरहेका बिरामी खोज्दै उपचार गथ्र्यौं।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ग्रीन सिटी बनाउनेदेखि अपाङ बालबालिकालाई निःशुल्क फिजियोथेरापी सेवा, कर्णालीका विभिन्न स्थानमा विशेषज्ञ सेवासहितका निःशुल्क स्वास्थ्य क्याम्प, निःशुल्क औषधी वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्म फाउन्डेसन लागिरहेको छ। जसको अध्यक्षता डा. केसी आफैंले गरिरहेका छन्।